अमृता | Kamsastra
Sex, अनुभव, अमृता, नेपाली यौन कथा,
बीएस्सी दिएर त्यसै बस्दा हात-मुख जोड्न ठूलो समस्या पर्ने भएकाले जागिरको खोजीमा लागेँ। सोर्सफोर्स नहुनेका लागि काठमाडौँमा जागिर पाउनु भनेको स्यालको सिंह पाउनुजस्तै हो। सरकारी कार्यालय तथा संस्थाका हाकिमहरूसँग फरियाको त के गोरु बेचेको समेत नाता नपर्ने भएकाले त्यतातिर जागिर खोज्ने प्रयासै मैले गरिनँ। साइन्स पढेको र काठमाडौँमा च्याउजस्तै उम्रिएका स्कुल भएकाले त्यतैतिर खोजी तलासी गर्न थालेँ जागिरको। दार्जीलिङेहरूले चलाएको एउटा कथित स्कुलमा बढीमा ६ महिनाका लागि माष्टरी मिल्लाजस्तो भयो। यो जागिर खोजिदिन मद्दत गर्ने पनि क्याम्पस पढ्दाको सहपाठी सुमित्रा भई। ऊ त्यही स्कुलकी माष्टर रहिछ। उसैका अनुसार विज्ञान शिक्षक बिरामीमा बसेकाले त्यो पद खाली भएको रहेछ।सुमित्रासँगै त्यस स्कुलमा गएँ। गोबरको थुप्रोजस्तो अनुहार परेकी प्रिन्सिपल रहिछे। शिष्टाचारवश नमस्कार गर्नै पर्‍यो। जम्माजम्मी तीन हजारभन्दा बढी तलब दिने भइनँ। काठमाडौँको महङ्गीमा जाबो तीन हजारले के गर्नु ? तर नहुनु मामाभन्दा कानो मामा नै निको भनेर त्यो माष्टरी पनि स्वीकारेँ।
गाउँमा एसएलसी दिएर केही महिना माष्टरी गरेकाले पढाइमा केही ज्ञान पनि थियो। गाउँमा माष्टरी गर्दा त खुबै स्वाद भएको थियो, कोरेलीहरूलाई ट्युसन पढाउँदा। अलिकति राम्री केटीलाई एकान्तमा पर्‍यो कि तिम्रो फलानो विषय कमजोर छ, ट्युसन पढ्न आऊ भन्ने अनि दुई-चार दिन ट्युसन पढाएजस्तो गर्ने, त्यसपछि स्कुलको किताब में क्या रखा है, जवानीकी किताब पढो भन्दै यताउतीको गोटी मिलाएर रातारात युवती बनायो।एक पटक जिम्बालकी छोरी अमृतासँग खुब मोज मारिएको थियो। जिल्लाको सदरमुकाममा विभिन्न खेलकुदको आयोजना भएको थियो। उक्त खेलकुदमा भाग लिन मेरै नेतृत्वमा अमृतालगायत अन्य दुई केटी र पाँच जना केटाको टोली सदरमुकाम गएको थियो। हाम्रो स्कुलबाट जिल्ला सदरमुकाम पुग्न कस्सिएर एक दिन हिँड्नुपर्ने। बाटोमा एउटा आफन्त भेटियो। ऊसँग म अरूलाई हिँड्दै गर भनेर गफ गर्न थालेँ। एक घन्टाजति अलमल भयो। विद्यार्थीहरूलाई भेट्न म हस्याङ-फस्याङ गर्दै उकालो चढ्न थालेँ। आधा उकालोमा पुगेपछि अमृतासँग भेट भयो। ऊ हिँड्न नसकेर थला परेकी रहिछ। अरू साथीहरू अगाडि लागिसकेछन्। मधेसबाट बाबुले ल्याइदिएको चुच्चे जुत्ता लगाउँदा उसको यो हविगत भएको रहेछ। अमृताले खुट्टा कुँजो लागेर हिँड्नै नसक्ने भएको बताई। अमृता अब मेरो लागि घाँडो भई। जसरी भए पनि सदरमुकाम त पुर्‍याउनै पर्‍यो। 'ल मेरो कुममा अडेस लागेर बिस्तार-बिस्तार हिँड' भनेँ र उसलाई उठाएँ। अमृताले जीउको पूरै भार मेरो कुममा पारी र हिँड्न थाली। उसलाई थप भरथेग दिन मैले एउटा हातले उसको कम्मर समातेँ। एउटा हातले कम्मरमा र उसको छाती आफ्नोमा परेकाले अमृताको सम्पूर्ण भार थामेँ।उकालो हिँड्दा पनि मेरो पुंषत्व भित्रभित्रै जाग्न थाल्यो। त्यसपछि मैले जानाजान उसको कुरकुरे वैंशलाई कुत्कुत्याउन थालेँ। त्यसपछि मैले अमृतालाई एउटा हात मेरो कम्मरमा समाउन लगाएँ र आफ्नो हातले भने उसको कुम समाएर हिँड्न थालेँ। मेरो हात बिस्तारै कुमबाट छातीतिर सर्न थाले। अनि मैले उसको छातीलाई कस्न थालेँ। अमृताको जोड पनि मेरो कम्मरमा बढ्न थाल्यो। यही क्रममा एकछिन उकालो हिँडेपछि कस्तो तीर्खा लागेको, पानी खान पाए पनि हुन्थ्यो भनेर अमृताले आफ्नो टाउको सर्लक्क मेरो कुममा राखिदिई। हामी पानी खानलाई मूलबाटो छाडेर खोल्सातिर लाग्यौँ। खोल्सामा अलिकति पानी जमेको रहेछ। हामीले त्यही जमुवा पानी खाएर तीर्खा मेट्यौँ। कति शीतल रहेछ यहाँ त भनेर अमृता एउटा रुखको छहारीमा लम्पसार परी। म पनि अति नै थाकेको थिएँ, उसैसँग ढल्किएँ। 'खै सर, हात यता ल्याउनुहोस् न' भन्दै अमृताले मेरो हात तानी र त्यसैमाथि सिरान पारेर सुती। एकछिनपछि एउटा खुट्टा मेरो खुट्टामाथि चर्ढाई। खोल्साको चिसो र अमृताको यो व्यवहारले मभित्रको पुंषत्व जाग्न थाल्यो।'खुट्टा ज्यादै दुखेको छ ?'- मैले सोधेँ।'टेक्नै नहुने गरी पोलिराखेको छ'- अमृताले जवाफ दिई।खै त, त्यसो भए एकछिन माडिदिन्छु भनेर उठेर म उसको खुट्टा माडिदिन थालेँ। पिँडौलाबाट सुरु भएको यो खुट्टा माड्ने काम बिस्तारै-बिस्तारै माथि-माथि र्सन थाल्यो। अमृताले कुनै प्रतिकार गर्नुको बदला आनन्द मानेर आँखा चिम्लन पुगी। यसबाट म झन् उत्साहित भएँ। त्यसपछि खुट्टा थिच्ने काम उसको दोभानको छेउछाउमा पुगेर सीमित र सक्रिय हुन थाल्यो। अमृताको तिघ्रा मात्रै माडेर आफूलाई चित्त बुझेन। त्यस कारण एउटा हातले उसको छाती पनि माड्न थालेँ। अहिलेसम्म पनि अमृता आनन्दसँग आँखा बन्द गरेर ढल्किरहेकी छ।मैले बिस्तारै उसको कट्टु तल सारेर हेरेँ। भर्खर जुङ्गँरेखी बसेका रहेछन्। अनि मैले पनि आफ्नो सुरुवालको इँजार खोलेँ र ऊमाथि चढेँ। मेरो पुरुष अङ्ग लगेर ठाउँमै जोडिदिएँ। आम्मै के गरेको - भन्ने अमृताको प्रश्नको जवाफमा मैले उसको ओठ टोकिदिएँ। र, आफ्नो काम चालु गरेँ। अमृताले छट्पटाउँदै दायाँ र बायाँ गर्न थाली भने म काममा व्यस्त रहेँ। केही समयसम्म यही क्रम जारी रह्यो। म शिथिल भएँ। हामीले एकछिन थकाइ मार्‍यौँ र उकालो लाग्यौँ।सदरमुकाम पुग्दा झमक्कै साँझ परिसकेको थियो। बत्ती र यातायात नपुगेको हुनाले अन्य सदरमुकामझैँ यो सदरमुकाम पनि साँझ पर्नासाथै मानिसहरू बाटाघाटाबाट ओछ्यानमा पुगिसकेका हुन्छन्। हाम्रो स्कुलबाट आएको टोली पनि भातसात खाएर ओछ्यानमा ढल्किन थालिसकेको रहेछ भने होटलमा भात सकिएको मात्र होइन, भान्छा पनि उठाउने तयारी भैसकेको रहेछ। हामी पुगेपछि हत्त न पत्त होटल मालिक्नीले गुन्द्रुक र भात पकाइदिइन्। खाद्यान्नभन्दा भोक मीठो भनेर खाइयो। खाना खाने समस्या त टर्‍यो। तर अब सुत्ने समस्या खडा भयो। ओछ्यान खाटजति पहिले आइपुगेकाहरूले नै कब्जा गरिसकेका रहेछन्। होटल्नीले अमृता र मलाई त्यहीँ छिँडीको भान्छामै एक-एकवटा गुन्द्री ओछ्याई काम चलाउ कपडा दिइन्। दिनभरिको थकाइले गर्दा राम्रो ओछ्यानको भन्दा पनि हामीलाई थकाइ मेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने ध्याउन्न थियो। हामी आ-आफ्नो ओछ्यानमा पल्टियौँ।कता-कताबाट मनमा दिउँसोको कुरा खेल्न आएछ। लागेको निद्रा बेपत्ता भयो र दिउँसोको बाहिर-बाहिर मात्र दलेर छाड्नुपरेको सम्झिएर भित्रैसम्म पुर्‍याउने इच्छा मनमा प्रबल हुन थाल्यो। अमृताको भर्खर-भर्खर जुँगाको रेखी बसेको समतल भाग, प्वाट्ट उठेको दोभान अनि कस्सिएको छाती सम्झिएर आफूलाई ठ्याम्मै निद्रा लागेन। केही समय बिरालोको चालमा उठेर अमृताको ओछ्यानमा पुगेँ। त्यसपछि अमृतासँग लपक्क टाँस्सिएर उसको मुखमा आफ्नो मुख लगेर जोडेँ। उसले एउटा हात मेरो लिङ्गतिर लगेपछि थाहा भयो, उसलाई पनि निद्रा लागेको रहेनछ भन्ने। बिस्तारै मैले पनि आफ्नो हात जाङतिर लगेँ र खेलाउन र सुम्सुम्याउन थालेँ। अब हामी दुवैको थकाइ बेपत्ता भइसकेको थियो। त्यसपछि मैले बिस्तारै आफ्नो लिङ्गलाई उसको कापेतिर ल्यान्डिङ गर्न थालेँ।भित्र नहुल्नुस् है, साह्रै दुख्दोरहेछ, दिउँसोको जस्तै बाहिर-बाहिरै गर्नुहोस् भन्ने राय अमृताले बिस्तारै कानमा व्यक्त गरी। एक पटक पस्न मात्र गाह्रो हो, पसिसकेपछि कति मज्जा हुन्छ भन्ने तिमीलाई के थाहा - मैले पनि उसको स्वरमा भनेँ।'जति मज्जा भए पनि के गर्नु, तपाईंको त्यति लामो र मोटो छ। मैले कहिल्यै हालेकी पनि छैन। अघि दिउँसो अलिकति पस्दा त मरुँलै जस्तो भयो'- अमृताले आफ्नो स्थिति बताई। तिमीलाई साह्रो नपर्ने गरी बिस्तार-बिस्तार हाल्छु भनेर मैले आफ्नो नाललाई अमृताको तीनकुनेतिर सोझ्याएर जबर्जस्ती धक्का दिएँ। अमृता ऐय्या भनेर छट्पटाई तर मैले त्यसको कुनै प्रवाह पनि गरिनँ र उसलाई आफ्नो ठाउँ पनि छाड्न दिइनँ। एकछिन त उसको छट्पटाइमा कुनै कमी आएन तर केही बेरपछि उसको छट्पटाइ उत्तेजनामा बद्लिन थाल्यो। तैपनि मेरो आधाभन्दा पसेन। एकैचोटि गर्दा अर्को आपत आर्इपर्छ भनेर मैले आधामा नै आज चित्त बुझाउने विचार गरी धक्का दिन थालेँ। १५ मिनेटपछि ऊ पनि शान्त भई, म पनि शान्त भएँ।'कस्तो निष्ठुरी त्यसरी मर्ने गरेर पनि गर्नुहुन्छ ?'- अमृताले बिस्तारै भनी।'एक पटक न एक पटक छिराउन परिहाल्यो। आज नभए भोलि, मैले नभए अरू कोहीले धक्का दिइहाल्थ्यो, त्यसमा पनि मैले त आधा मात्र छिराएको छु'- मैले स्पष्टीकरण दिएँ। आधा छिराउँदा त आफ्नो ढाड झन्डै भाँच्चिएन, पूरै छिराएको भए त मेरो के गति हुन्थ्यो होला - भन्दै अमृताले कस्तोसँग टट्याउन पनि थाल्यो, के गर्ने होला भनी। त्यसो भए म एकछिन हातले सुम्सुम्याइदिन्छु भनेर अमृताको कापेमा बिस्तारै सुम्सुम्याइदिन थालेँ। मेरो सुम्सुम्याइबाट अमृताको दर्द मात्र हटेनछ कि उसमा उत्तेजना पनि बढ्न थालेछ। 'यही मोराले हो मलाई दुःख दिएको' भनेर च्याँठ्ठिदै मेरो कान्छो खेलाउन थाली। एकछिनपछि मेरो कान्छो लौरोजस्तो ठाडो भयो र मेरो मनमा पनि पाँच हजार भोल्टको उत्तेजना दौडिन थाल्यो। फलामले फलामलाई काट्छ भन्ने उक्ति सम्झेरै लिङ्गले पारेको घाउ लिङ्गले नै निको पार्छ भन्ने सम्झिएर म मेरी अमृतामाथि चढेँ। 'आम्मै कस्तो पापी, फेरि गर्न थालेको ?'- अमृताले भनी। यसले बनाएको घाउ यसैले निको पार्छ, तिमी र मलाई मज्जा हुन्छ भन्दै मैले आफ्नो कान्छो भाइलाई अमृताको कालो गुफामा धकेलिदिएँ। एकछिन छट्पटाएपछि अमृताको दर्द बेपत्ता भएछ। अब त ऊ तलबाट पनि धक्का दिएर आफ्नो जवानीको जोश देखाउन थाली। अमृताको जोश देखेर मैले पनि मेरो लिङ्गलाई पूरै हुलेँ र धक्का दिएँ। अमृताको टाइट पुतीमा चिक्न पाउँदा मलाई पनि एकदम मजा आएको थियो । एकछिन फेरि ऊ छट्पटाई तर मैले आफ्नो काम निर्वाधरूपमा जारी राखेँ। केही छिनपछि मेरो लिङ्ग निर्वाधरूपमा भित्र-बाहिर गर्न थाल्यो। अमृता पनि तलबाट मच्चिन थाली।
Labels: Sex, अनुभव, अमृता, नेपाली यौन कथा